Pirezedaantii Mana Murtii Federaalaa ta'uun kan muudaman Aadde Ma'aazaa Ashannaafii eenyu? - BBC News Afaan Oromoo
Pirezedaantii Mana Murtii Federaalaa ta'uun kan muudaman Aadde Ma'aazaa Ashannaafii eenyu?
Madda suuraa, Dominique Charriau
Aadde Ma'aazaa Ashannaafii guyyaa har'aa paarlaamaan Pirezedaantii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa ta'uu isaanii mirkaneesseef kun aangoo kanatti osoo hin dhufiin dura bakka baayyeetti hojii milkaa'aa hojjechuun beekamu.
Heerri mootummaa Itoophiyaa, Seerri maatii, seerri yakkaa, kan soorataafi lammummaa dubartoota irratti loogii kan godhan waan ta'aniif foyyaa'uu qaba jechuun duula gaggeessuudhaan gaaffii caasaa dubartootaa gara fuula duraatti fidanii akka ajandaa biyyaa ta'u ogeettii seeraa cimoodha.
Waldaa Ogeessota Seeraa Dubartootaa Itoophiyaa waggaa sagaliif kan gaggeessaa turan Aadde Ma'aazaan waldicha waliin ta'uun qaawwi jiran akka sirreeffaman duula gochuun alatti dubartoota hir'ina qabaniifi deggersa seeraafi eegumsa taasisuun tajaajilaa turan.
Yeroo tokko kan namoota hedduu biratti dubbatamaa ture dhimma durbee Abarraash Baqqalaa kan umuriin ishee waggaa 14 taate tokko ture.
Abarrash nama butee ishee gudeede ajjeesuusheetiin kan itti murtaa'e ta'ullee Waldaan Ogeessota Seeraa Dubartootaa Itoophiyaa abokaatoo ta'ee dhaabateefii bilisa baateetti.
Seenaan kun fiilmii Zara Sannaay Mahaarii qopheesse 'Difiret' jedhamuun dhiyaatee daawwstamaa ture.
Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Komishinii Misooma Afriikaa (UNECA) keessa seera haadhotiifi daa'immanii gorsuudhaan waggaa ja'aaf tajaajilteetti.
Aadde Ma'aazaan, mirgoonni dubartootaa sadarkaa Afriikaatti akka foyyaa'uuf akkasumas karaa mirgoonni isaanii ittiin foyyaa'u qorannoo gara gara garaa dhiyeessuudhaan, karaa deggersi seerota foyyeeffamaniif taasifamuu qabu irratti gorsa kennuun hojjetteetti.
Naannoo Beneshaangul Gumuzitti dhalatanii kan guddatan Aadde Ma'aazaan Komishinii Heera Mootummaa gorsituu seeraa ta'uun tajaajilaa kan turan yommuu ta'u, yeroo kana hojjetanitti mirgoonni haadhotiifi daa'immanii akka heera mootummaa keessa galan gochuudhaan yaalii hedduu taasisaniiru.
Dhaabbata Gaanfa Afrikaatti dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi nageenyarratti hojjetu- Intar Afriikaa jedhamu hoogganuun, filannoo bara 1997 irratti waltajjiin walfalmii paartilee siyaasaa qopheessuurratti gumaacha guddaa goadhaniiru.
Kana malees, Foramii Poolisii Afrikaa Chaayilid jedhamu gorsaa kan turan yommuu tahu, dhaabbilee UN garagaraa fi gorsaa Gamtaa Afriikaa tahuunis tajaajilaniiru.
Kanaan alattis, baankii dubartootaa isa jalqabaa kan tahe-Baankii Innaat kan hundeessan wayita tahu, walitti qabduu boordiis turan.
Baankiin Innaat dubartoota hojii kalqxootaaf dhiyeessa maallaqaa kan gochuuf kan hundaa'edha.
Digirii jalqabaasaanii Seraan Yuniivarsiitii Addis Ababaarraa kan argatan yommuu tahu, Maastarsii isaanii ammoo Barnoota Qo'annoo Idil addunyaan Koniktikee irraa argataniiru.
Waraqaan eebbaa isaanis hirmaannaa dubartootaa rifarandamii irratti qaban kan gadi fageenyaan xiinxalu ture.
Miseensa gorsaa Mo Ibrahim Africa Governance Index yommuu tahan, barreessaa Dhaabbata Tokkummaa Afriikaa duraaniin filatamuun, miseensa koree nagaa fi misooma dubartoota Afriikaa tahuun tajaajilaniiru.
Tajaajilasaanii garagaraa fi Waldaa Ogeeyyii Seeraa Dubartoota Itoophiyaaf gumaacha taasisaniif badhaasa adda addaa argataniiru.
Kanneen keessaas The African Leadership Prize of the Hunger Project fi International Women of Courage keessatti argamu.
22 Ebla 2021
'Namoonni siyaasaa ummata Somaalee akka lammii Itoophiyaatti hin ilaalan'
Talaalliin Covid kan sobaa Poolaandiifi Meeksikootti qabame
Beenishaangul Gumuzitti hidhattoonni aanaa tokko 'to'annoosaanii jala oolchan'
Ameerikaatti shamarreen sanyii warra gurraachaa taate dhukaasa poolisiin duute